Mihinana ny tsy fihinana | NewsMada
Mihinana ny tsy fihinana
Par Taratra sur 20/12/2016
Haringana tanteraka! Mahalasa saina ny zava-misy ankehitriny. Miditra gaboraraka eto Madagasikara avokoa ny vokatra sakafo tsy fanta-pihaviana rehetra. Anisan’ny firenena tena mahatonga entana betsaka ny any Sina.
Paty, vary, biskoy, siramamy, hanimbifotsy, saosy, tsakitsaky ankafizin’ny ankizy… Mahazo miditra avokoa izy ireny. Tsy voaporofo ny maha ara-dalàna ireny entana ireny. Tsy fantatra na ara-pahasalamana na tsia.
Efa malaza koa izao ny vary vita amin’ny plastika. Miparitaka any amin’ny tambajotra sosialy ary mampatahotra ny Malagasy ny fiparitahany. Mora kokoa raha oharina amin’ny vary rehetra izany. Efa afangaro amin’ny tena vary ihany koa aza mba tsy ahafantaran’ny mpividy azy. Tsy ny vary ihany fa eo koa ny karazana paty.
Ny hany fantatra betsaka ny karazan’aretina mahazo ny malagasy ankehitriny.Areti-baovao tsy fanta-pototra ary mampiaiky ny dokotera izay aleha. Manginy fotsiny ny aretina homamiadana mahazo hatramin’ny zazakely sy ny ankizy.
Hafatrafatry ny dokotera ny tsy tokony hihinana ireny karazana sakafo vita sinoa ireny. Sakafo natoraly, vokatra amin’ny zezika natoraly hatrany no hanentanany ny marary. Voankazo, legioma…
Misoko mangina ny famonoana an-dRamalagasy. Hasesika eto avokoa ny entana lany andro avy any amin’ny firenen-kafa any. Sodokan’ny mora koa ny Malagasy noho ny tsy fahampian’ny fahefa-mividy ka mihinana izay rehetra hitany. Noana!
Mitazam-potsiny ny fanjakana manoloana ny famonoana miadana ny Malagasy. Tsy misy ny fandraisana andraikitra. Tsy voasakana ny fidiran’ireny entana mamosavy ireny eto Madagasikara fa gaboraraka.
Efa misy ny kopaka isasahana any ananonanona any matoa malalaka ny fidiran’izany. Fantatry ny fanjakana ny fisian’ireny entana ireny saingy iniana tsy resahina mihitsy. Tsy ampahafantarina ny madidnika. Misy antony ao.
Fantaro fa tsy mihinana ireny sakafo hafahafa ireny ny olona ambony sy manan-katao. Manana ny fahefa-mividy hihinanana sakafo ara-pahasalamana izy ireny ary mahafantatra tsara fa mampidi-doza ny korontan-tsakafo miditra eto.